बिचार/ब्लग – Page 41 – Sawal Nepal
वर्गीय अारक्षण अाजको अावश्यकता हो-सावित्री सुबेदी
म अाज पनि भन्न चाहान्छु, वर्गीय अारक्षण अाजको अावश्यकता हो। जसरी जातीय अारक्षण बाढिदै छ त्यसले देशमा हजारौं सि•के राउतहरु जन्म गराउँछ। हाम्रो राष्ट्रियता,अखण्डता र सार्वभौमिकतामाथि खेलवाड हुदैँछ। जातीयतामा देशलाई बन्धक बनाएर अाम नेपालीको समृद्ध हुने सपनामाथि कुठाराघात गरिदैछ। राष्ट्रियतामाथि सम्झौता गरेर सरकार चलाउने र भारतीय अाशिर्वादमा राजनेता कहलिने दिन गए। अाज विश्व ध्रुवकृत हुँदै
भारतीय दबाबमा प्रचण्ड चुनाव गराउन चाहादैनन्
२३ माघ–प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले र सत्ता साझेदार कांग्रेससँगको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भन्ने मुख्य वाक्य हो– चुनाव घोषणा तत्कालै हुन्छ । सत्ता सहयोगी मधेसी मोर्चासँगको बैठकमा तिनै प्रधानमन्त्री दाहालले भन्ने अर्काे मुख्य वाक्य हो– विश्वास गर्नुस् संविधान संशोधन नगरी चुनाव घोषणा गर्दिनँ । अवका ११ महिना भित्र संघीय संसद, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन
हुनेवाला जिवनसाथी कस्तो होस् भन्ने चाहना राख्छन आम युवती ?
यमुना अर्याल आफ्नो हुनेवाला जिवनसाथी कस्तो होस् भन्ने चाहना राख्छन आम युवती ? पक्कै हेर्दा लायकको, पढेलेखेको, आफ्नो खुट्टामा उभिएको आदिआदि । ठिक विपरित युवाहरू कस्ती युवती आफ्नो जीवनसाथी होस् भन्ने चाहन्छन होला ? हेर्दा चट्ट राम्री, शरीर मिलेकी……तर यति मात्रै होइन । अहिले हेर्दा अनुहार मात्र राम्रो भएका युवती भन्दा पनि आत्मनिर्भर युवती खोज्ने
यतिखेर अमिलोले कुंडिएको दाँतजस्तो भएको छ चीनसँगको हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्ध
जीएस पौडेल सीके राउतले देश टुक्र्याउने अभियान चलाउँदा चुइक्क नबोल्ने सरकारी रवैयाको आज चर्चा नगरौं । भूकम्प पीडितलाई हेलिकप्टरबाट पैसा बाँड्छु भन्नेले पीडितलाई यो जाडो याममा पनि पालमुनी राखेको कुरा पनि नगरौं । परराष्ट्रमन्त्रीले ६ महिनामा ६ पटक भारत भ्रमण गरिसके, उनी मासिक तलब बुझ्न जान्छन् कि नगई नहुने केही आवश्यकता परेको हो भन्ने पनि
मेरो लगन जुरेको छैन
संविधान संशोधन संवैधानिक–असंवैधानिक हुने विषयलाई लिएर राजनीतिक दलहरू दुई कित्तामा विभाजित भइरहेको अवस्थामा संविधान जारी गर्ने नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा। रामवरण यादव पछिल्लो केही दिनयता आफ्नो पुख्र्यौली गाउँ धनुषाको सपहीमा छन् । अमेरिकाबाट क्यान्सरको सफल उपचार गराएर फर्केका पूर्वराष्ट्रपतिले आफ्नी छोरी अनिताका साथ आफन्त र गाउँलेसँग भेटघाट र भलाकुसारी गरी समय बिताउने गरेका छन् ।
विमल लामिछाने- पत्रकारिता गरेको लामै समय भएपनि शहरीया परिवेश मेरालागि नयाँ थियो । बजारको नियमलाई उल्घंन गर्दै बिहान ५ बजे अघिनै म उठ्ने गर्दथे । एक दिनको कुरा हो, करिब ६ बजेको थियो पत्रकारिताकै माध्यबाट चिनजान भएका साथी इन्द्रको फोन आयो……. । हेलो तयारी रहनुहै हामी ९ बजे एउटा कार्यक्रममा जानु छ । मैले जवाफ
‘शोभराज शौचालय जाँदैन थियो’
हामी डिल्लीबजार कारागारमा थुनिएका थियौँ । ०६२ देखि राजनीतिक आस्थाका बन्दी थियौँ । हामीमाथि ०६६ मा जेलकै गुन्डा लगाएर आक्रमण गरियो । हामी नराम्ररी घाइते भयौँ । मेरो हात भाँचियो । वीर अस्पताल लगेर प्लास्टर गरिदिए । घाइते अवस्थामा नै हत्कडी लगाएर हामी तीनजना आस्थाका बन्दीलाई सेन्ट्रल जेल लगे । रातको १० जति बजेको थियो
यसरि भयो बिद्यूत प्राधिकरणमा तासको रिर्पोटिङ
बिष्णुप्रसाद पोखरेल/२७ पुष /दमक÷सोमबार करिब ११ बजे बिद्यूत प्राधिकरण बितरण केन्द्र दमकमा पुगेका एक सेवाग्राहीले मेरो मोवाइलमा फोन गरे । उनले भने–‘बिष्णु जी बिद्यूत प्राधिकरणको गेट नजिकै रहेको एउटा कोठामा त्यहाँका कर्मचारीहरु तास खेलिरहेकाछन् ।’ एउटा पत्रकार सम्मेलनमा थिए । करिब १ घण्टापछि म उक्त पत्रकार सम्मेलनबाट निस्किए । मैले संगै रहेका कोहि पत्रकारहरुलाई पनि
साँसद महेन्द्रकुमारी सुब्बाले त्यसो गर्न सुहाउथ्यो ?
बिष्णुप्रसाद पोखरेल-दमक÷मंगलवार झापाको आकाशे पुलको उद्घाटनमा एउटा घत लाग्दो बिषय बन्यो । अहिले चर्चाको बिषय बनेको छ । कार्यक्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष, झापा क्षेत्र नं. ७ का साँसद केपी शर्मा ओली प्रमुख अतिथि रहेका थिए । बिशिष्ठ अतिथिमा पूर्व कानूनमन्त्री अग्नि खरेल र समानुपातिक साँसद महेन्द्रकुमारी सुब्बा रहेकी थिइन् । उक्त कार्यक्रममा